About | Extreme Fetish Blog
Mhoro uye unogamuchirwa kune yedu inoshamisa porn webhusaiti! Haisi nzvimbo chete yaunogona kubvisa matombo ako kana kushandisa imwe nguva uye usazombodzoka, aiwa - inzvimbo iyo vanhu vanogutsa zvishuwo zvavo zvepabonde. Nzvimbo iyo vanhu vanowana sevanhu vane pfungwa dzakafanana, nzvimbo iyo yako yese yakadzika, fungidziro dzakatsveyama dzinove chokwadi.
Yedu inoshamisa yeunganidzwa ye porno inoramba ichikura uye ichichinja, zuva rega rega isu tinoisa chimwe chinhu chitsva, chinonakidza uye chakatsveyama zvakanyanya. Iwe haugone kuwana chero chinhu chingafungidzirwe chakaremara, kupingudza kana kupatsanura-kunze vanilla pano. Hatizove nazvo neimwe nzira. Tinoda kuti urambe wakatendeka kune zvishuwo zvako zvakamonyoroka, isu tinozviremekedza, nekuti isu takafanana. Ndinovimba, kuda kwedu zvinhu zvese zvakanyanyisa erotica kuchaita yako yekuona-porn chiitiko chakanyanya kukwana. Uye zvino inguva yakanaka yekutaura nezveese zvikamu zveyako nyowani webhusaiti yaunofarira.
Kutanga kubva, isu tine scat mavhidhiyo. Haisi iyo kapu yemunhu wese yetii, asi manhamba edu anoratidza kuti ndeimwe yeakanyanya (kana asiri iwo akanyanya) niches inozivikanwa pawebhusaiti yedu. Tevere isu tine Enemas ine enema yekutamba mavhidhiyo uye mamwe ese marudzi enema-ane hukama neasina mitambo yepabonde. Tichifamba zvakapfuura izvo, isu zvakare tinogamuchira mavhidhiyo uye zvikamu zvine chekuita neFisting / Bizarre Insertions uye Makuru Matoyi / Fucking Mashini. Izvo ndezve vanhu vanonakidzwa nekuona vamwe vasikana gomba-rakasimba-gomba rinotambanudzwa, rinenge rakabvarurwa nepakati. Nekudaro, muchidimbu, kana iwe uchida kuwana vertigo nekutarisa paburi remumwe munhu, zvikamu zviviri izvi ndezvenyu.
BDSM, hongu. Hapana chinhu chakangofanana nekutonga kwakamonyoroka uye kuendesa kunotapira. Tine chikamu cheBDSM chaicho nezvikwapuro, ngetani uye nezvimwe zvinhu zvinofadza Rihanna nekubvuma kwake. Tevere isu tine Chikamu cheVakadzi Kudzora kuti ugutse zvese zvako zvehukadzi zvine chekuita nevakadzi, gadzirira kuona kumeso, kunamata netsoka, cuckolding nezvimwe. Lesbian Domination kana Lezdom chikamu chakazara nemavhidhiyo akanaka ane vaviri (kana kupfuura) vasikana vanoita mimwe mitambo yeBDSM yakashata. Kutonga kweVarume kana kutukwa ndezve vakadzi vanozvifarira zvakashata, zvakati rebei uye ivo vakomana vane moyo unoda kusava nemoyo, vasina tsitsi uye vane hukasha.
Kana iwe uchitsvaga chimwe chinhu chakanyanyisa, isu takakufukidzira. Zvakadii nezve mamwe akanaka marutsi mavhidhiyo? Vasikana / vakomana kurasikirwa kutonga uye barfing pane kamera, kurutsa kune mumwe nemumwe kana kuve bile-yakafukidzwa panguva yavo yakakombama rudo-rwekuita zvikamu? Zvinonzwika zvakanaka, handizvo here? Isu zvakare tine chikamu chegomba chakakumikidzwa kuRape Fantasy uye, zvisingaite zvakakwana, nhamba dzedu dzinoratidza kuti iyi niche inofarirwa nevashanyi vedu vechikadzi. Kana iwe uchida rukova rusingaperi rwekutsva mavhidhiyo, isu zvakare tine izvo. Zvimwe zvikamu zvinosanganisira Bondage uye Fetish, PVC uye Latex uye Fetish Miscellaneous.
Ingoitika kana iwe uchida kuti vakadzi vako vakushamise iwe, isu tine chikamu chakazara chakatsaurirwa kuma shemales. Ivo chete vanopisa-t-vacheche vane miviri inoshamisa uye machikadzi echikadzi. Uchazvida. Kune zvakare chikamu chakatsaurirwa chete kune vakadzi vane mvere. Haisi chete pussies ine vhudzi, kana - ava vacheche vane hairest fucking armpits yawakamboona uye hatisi kana kutaura nezve hirsute yavo, inoshuvira maburi anal.
Kune chimwe chinhu chakanyanya tamer, isu tine chikamu chakatsaurwa kune tsoka Fetish. Ndiwo fetish akajairika munhu angafunga nezvake, saka hachizi chibereko, tinogona kuzviwanira chikamu cheTits Fetish pamwero iwoyo. Chikamu cheFartts chinoita kuti iwe utarise mavhidhiyo ane, chii chimwe, farting vasikana nevakomana. Squirting mavhidhiyo akatsaurirwa kune anogara achimanikidza, anoputika echikadzi orgasm. Spit mavhidhiyo achaita muromo wako mvura, iwe uri gonna gonna kunyudza pamusoro pese iyo keyboard. Kune zvekare zvikamu zvakapihwa Medical Hardcore Fetish, Pumping, Vechidiki (18+) uye izvozvi zvine mukurumbira Asshole Corner. Tichiri kuvhura mazano, ndeipi iri nani - Asshole Corner, Asshole Asylum kana Asshole Alley? Alliteration iri kukwezva, ibvume.
Uye yedu ace mugomba, sekutaura, ndiyo Yakanyanya Zvakanyanya Stuff chikamu. Yakanyanyisa zvekuti haina kana zita chairo. Kuitumidza chimwe chinhu kungave kusanzwisisika, nekuti hapana nzira yekunongedza tambo yakajairika mune zvirimo. Izvo zvese zvemusango, zvimwe zvezvinoshamisa kwazvo, zvakamonyana, zvechisimba zvinonyadzisira zvawati wamboona. Zvimwe zvezvinhu izvi zvakasarudzika, zvakabva kune zvakaunganidzwa zvakavanzika, zvimwe zvacho zvakatumirwa nevashandisi vedu vanobvumirwa zvinotyisa (asi zvinotyisa), uye zvimwe zvacho isu tangozviwana pane rakaomarara dhiraivhu raamai vako. Usatya kurivhura, harisi iro bhokisi reLemarchand. Tinoziva iwe unoda.
Kuti tiite nyaya refu iyi ipfupi, isu tinongoda kuti iwe unakirwe pawebhusaiti yedu. Izvo zvakasununguka uye saka chii, iwe unonetseka zvakanyanya futi. Iwe unoda porn yakakombama senge yakadaro uye isu tiri kukupa iwe. Zuva rega rega, vhiki nevhiki kunze, iro gore rese kutenderera. Iwe uri kuwana mahara emahara, matani ekunyanyisa porn, zvakare, mahara. Usaite zvisizvo nezvazvo: isu tinoda kunzwa mhinduro yako, tinoda kuti utitaurire mavhidhiyo aunofarira, gehena, iwe unogona kutotiudza nezve mafambiro ezuva rako - isu hatina basa, tinokuitira iwe uye isu kuda kunzwa kudzoka kubva kwauri.
Extreme Fetish Blog > About